Galaxy unpacked 2018 မှာဘာတွေမိတ်ဆက်လာမလဲ ? | Myanmar Mobile App
Home Trending Enterprise Galaxy unpacked 2018 မှာဘာတွေမိတ်ဆက်လာမလဲ ?
ကိုရီးယား စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူ Samsung အနေနဲ့ သြဂုတ်လ ၉ရက်နေ့ နယူးယောက်မှာ ပြုလုပ်မယ့် Galaxy unpacked 2018 ပွဲမှာ Galaxy Note9၊ Galaxy Watch တို့နဲ့အတူ Wireless Charger Duo ကိုပါပွဲထုတ်မိတ်ဆက်လာနိုင် ခြေရှိပါတယ်။ ထုတ်ကုန်သစ်တွေမှာ ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်ချက် တွေပါမလဲ
ပရိုဆက်ဆာပိုင်းမှာတော့ Exynos 9810 နဲ့ Qualcomm Snapdragon 845 ဆိုပြီးခွဲခြား ထွက်ရှိလာမှာပါ။ Galaxy Note9ကို 6GB RAM နဲ့အတူ 64GB, 128 (သို့) 256GB နဲ့ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး အထူးဗားရှင်း အနေနဲ့ 8GBRAM /512GB သိုလှောင်မှုနဲ့ပါ ထုတ်လုပ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထွက်ထားတဲ့ Note 8 နဲ့အဓိက ကွာခြားချက်အနေနဲ့ fingerprint scanner ကို dual ကင်မရာရဲ့အောက်ဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းတွေကတော့ 128GB မော်ဒယ်ကို ယူရို 1050 (ဒေါ်လာ 1230) နဲ့ 512GB ကို ယူရို 1250 (ဒေါ်လာ1460) ဖြစ်လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ Samsung အနေနဲ့ Galaxy Note9 ဖုန်းကို အရောင် ၅မျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး Galaxy Note9 ရဲ့အရောင်တွေကတော့ Black, Silver, Lilac Purple, Brown နဲ့ Coral Blue တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Samsung Galaxy Watch ကို အရွယ်အစား ၂မျိုးနဲ့ထုတ်လာနိုင်ပါတယ်။ စမတ်နာရီ၂မျိုးမှာ 1.19-inch round display နဲ့ 1.3-inch round display သုံးလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ မော်ဒယ်၂ခုလုံးမှာ LTE ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုနဲ့ Wi-Fi 2.4GHz b/g/n ထောက်ပံ့ပေးထားမှာပါ။ ကြီးမားတဲ့နာရီကို SM-R805 နာမည်နဲ့ သေးငယ်တဲ့ အရွယ်ကိုတော့ SM-R815 ဆိုပြီး model number ပေးထားပါတယ်။
Wireless Charger Duo ဟာ 25W output ဖြစ်ပြီး မော်ဒယ်နံပါတ် EP-N6100 လို့ပေးထားပါတယ်။ ဝိုင်ယာလက်အားသွင်းစက်လေးအတွက် အကောင်း၊အဆိုး၂ခု ဒွန်တွဲလျက်ရှိနေပါတယ်။ ကောင်းကွက်ကတော့ ဒီစက်လေးကို Note9 နဲ့အတူ တွဲဖက် မိတ်ဆက်လာမှာဖြစ်ပြီး Note9 နဲ့ Galaxy Watch ၂ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်း အားသွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုးကွက်ကတော့ ကြိုးမဲ့အားသွင်းမြန်ဆန်တဲ့ စနစ်ကိုထောက်ပံ့လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Galaxy unpacked 2018 မှာဘာတှမေိတျဆကျလာမလဲ ?
ကိုရီးယား စမတျဖုနျး ထုတျလုပျသူ Samsung အနနေဲ့ သွဂုတျလ ၉ရကျနေ့ နယူးယောကျမှာ ပွုလုပျမယျ့ Galaxy unpacked 2018 ပှဲမှာ Galaxy Note9၊ Galaxy Watch တို့နဲ့အတူ Wireless Charger Duo ကိုပါပှဲထုတျမိတျဆကျလာနိုငျ ခွရှေိပါတယျ။ ထုတျကုနျသဈတှမှော ဘယျလိုစှမျးဆောငျခကျြ တှပေါမလဲ
ပရိုဆကျဆာပိုငျးမှာတော့ Exynos 9810 နဲ့ Qualcomm Snapdragon 845 ဆိုပွီးခှဲခွား ထှကျရှိလာမှာပါ။ Galaxy Note9ကို 6GB RAM နဲ့အတူ 64GB, 128 (သို့) 256GB နဲ့ထှကျရှိလာမှာဖွဈပွီး အထူးဗားရှငျး အနနေဲ့ 8GBRAM /512GB သိုလှောငျမှုနဲ့ပါ ထုတျလုပျလာပါလိမျ့မယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈကထှကျထားတဲ့ Note 8 နဲ့အဓိက ကှာခွားခကျြအနနေဲ့ fingerprint scanner ကို dual ကငျမရာရဲ့အောကျဘကျမှာ တပျဆငျထားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဈေးနှုနျးတှကေတော့ 128GB မျောဒယျကို ယူရို 1050 (ဒျေါလာ 1230) နဲ့ 512GB ကို ယူရို 1250 (ဒျေါလာ1460) ဖွဈလာမယျလို့ သိရပါတယျ။ Samsung အနနေဲ့ Galaxy Note9 ဖုနျးကို အရောငျ ၅မြိုးနဲ့ ထုတျလုပျသှားမှာဖွဈပွီး Galaxy Note9 ရဲ့အရောငျတှကေတော့ Black, Silver, Lilac Purple, Brown နဲ့ Coral Blue တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
Samsung Galaxy Watch ကို အရှယျအစား ၂မြိုးနဲ့ထုတျလာနိုငျပါတယျ။ စမတျနာရီ၂မြိုးမှာ 1.19-inch round display နဲ့ 1.3-inch round display သုံးလာမယျလို့ သိရပါတယျ။ မျောဒယျ၂ခုလုံးမှာ LTE ကှနျရကျခြိတျဆကျမှုနဲ့ Wi-Fi 2.4GHz b/g/n ထောကျပံ့ပေးထားမှာပါ။ ကွီးမားတဲ့နာရီကို SM-R805 နာမညျနဲ့ သေးငယျတဲ့ အရှယျကိုတော့ SM-R815 ဆိုပွီး model number ပေးထားပါတယျ။
Wireless Charger Duo ဟာ 25W output ဖွဈပွီး မျောဒယျနံပါတျ EP-N6100 လို့ပေးထားပါတယျ။ ဝိုငျယာလကျအားသှငျးစကျလေးအတှကျ အကောငျး၊အဆိုး၂ခု ဒှနျတှဲလကျြရှိနပေါတယျ။ ကောငျးကှကျကတော့ ဒီစကျလေးကို Note9 နဲ့အတူ တှဲဖကျ မိတျဆကျလာမှာဖွဈပွီး Note9 နဲ့ Galaxy Watch ၂ခုလုံးကို တဈပွိုငျတညျး အားသှငျးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဆိုးကှကျကတော့ ကွိုးမဲ့အားသှငျးမွနျဆနျတဲ့ စနဈကိုထောကျပံ့လာမှာ မဟုတျပါဘူး။
Previous articleGaming စမတ်ဖုန်းများအား နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
Next articleသြဂုတ် ၁ရက်နေ့မှာရောင်းချသွားမယ့် Honor Play Special Edition စမတ်ဖုန်း